ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, ३३ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ? - jagritikhabar.com
ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, ३३ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत सभापति पदका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणाम आएको छ।
प्रारम्भिक मतगणनाअनुसार सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले सुरुवाती अग्रता बनाएका छन् भने शेखर कोइराला पछिपछि रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । ३३१८ मत गन्दा देउवाले १९८४ मत ल्याउँदा शेखरले १३०९ मत पाएका छन् । एक मत बदर भएको छ ।
मंगलबार राति साढे ११ बजेबाट मतगणना सुरू भएको हो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएका पाँच उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि बहुमत नल्याएपछि मंगलबार दोस्रो चरणको निर्वाचन गरिएको थियो।